Naag kacsatay sidaan ku garo - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Naag kacsatay sidaan ku garo
Naag kacsatay sidaan ku garo
iftineducation.com - Guurka laysku xusho amaba laysku doorto lacagta iyo daneysigu wuxu waxyeelo weyn ku hayaa mushtamaca Mareykanka , Marka loo eego daraasad cusub oo lagu daabacay American Journal of Couple and Relationship Therapy khamiistii lasoo dhaafay .
Daraasadan oo Lagu ururiyey macluumaad laga soo heley in ka badan 1700 oo qof oo ah lamaanayaal is qaba oo Mareykan ah , iyada oo su’aalaha la weydiinaayeyna ay ku saabsanaayeen habka ku qanacsanaanta guurka , dhibaatooyinka ka dhex dhaca lamaanayaasha , xidhiidhka jacayl ee lamaanayaasha , iyo xasiloonida Guurka .
Dadka iyagu sheegey iney ku raaceen amaba dookhoodu ahaa lacag iyo daneysi kale waxay noqdeen boqolkiiba 90% halka dadka iyagu sheegey in calafkoodu uu yahay mid aan lacag amaba maalka qofka kale iyo dan khaas ah toona aaney ku raacin waxay noqdeen boqolkiiba 10%.
Waxana daraasadu sheegtey in dadka aan daneysi iyo maaldoonimo ku raacin jacaylkoodu ay kaga fiican yihiin kuwa kale xaga ku qanacsanaanta lamaanaha iyo xasiloonida guurkaba iyagoo sheegey in khilaafka ka dhex dhaca lamaanaha is qabaa aanu ahayn mid baaxad weyn. Laakin daraasadan ayaa geesta kale sheegtey in dadka iyagu lacagta iyo daneysiga isku raacey ay ka taaganyihiin guurkooda khasaare iyo qoomamo.
“Daraasadan oo ahayd baadhi taan guud waxaanu ogaaney in dadka lacagta iyo daneysiga isku guursadaa ay waxyeelo u geysteen qiimihii Guurka” jason Carroll oo ka mid ahaa baadhayaasha daraasadan isla markaasna barre sare ka ah jaamacada Family Life at Brigham Young University ayaa sheegey .
Daraasadu waxay kaloo intaas ku dartey in dadka daneystayaasha ahi ay isugu jiraan rag iyo dumarba , madow iyo cadaan , waxaney daraasadu sheegtey lamaanayaasha nasiibka badani waa dadka ka badbaada daneysiga iyo khiyaamada , waxaaney kula talisey cidkasta oo guurdoon ahi iney ka fogaadaan khiyaamo iyo daneysi beri ka maalin dhaawac u geysan karta qalbiga gacaliyahiisa.
Guurka laysku xusho amaba laysku doorto lacagta iyo daneysigu wuxu waxyeelo weyn ku hayaa mushtamaca Mareykanka , Marka loo eego daraasad cusub oo lagu daabacay American Journal of Couple and Relationship Therapy khamiistii lasoo dhaafay .
Daraasadu waxay kaloo intaas ku dartey in dadka daneystayaasha ahi ay isugu jiraan rag iyo dumarba , madow iyo cadaan , waxaney daraasadu sheegtey lamaanayaasha nasiibka badani waa dadka ka badbaada daneysiga iyo khiyaamada , waxaaney kula talisey cidkasta oo guurdoon ahi iney ka fogaadaan khiyaamo iyo daneysi beri ka maalin dhaawac u geysan karta qalbiga gacaliyahiisa.''